Ganaax La Duldhigay Yannick Carrasco Oo Ku Sii Dhaweynaya Ku Biiristiisa Kooxda Arsenal - Gool24.Net
Ganaax La Duldhigay Yannick Carrasco Oo Ku Sii Dhaweynaya Ku Biiristiisa Kooxda Arsenal
Yannick Carrasco ayaa ganaax kala kulmay kooxdiisa Shiinaha Dalian Yifang ka dib markii uu ku guuldareystay in waqtigii loogu talogalay uu ka soo laabto waajibaadkiisa qaran,.
Xiddiga doonaya inuu baxo ee reer Belgium ayaa seegay duulimaadkii u qaadi lahaa Shiinaha taasoo keentay inuu ka soo gaari waayo kulanka horyaalka Shiinaha ee ay kooxdiisa la ciyaareysay Hebei China Fortune.
Xiddiga Arsenal diirada u saaran Carrasco oo 25 jir ah ayaa sharaxaad uu ku soo qoray Twitter waxa uu ku sheegay in sababta uu kulankaas u seegay ay tahay inay dhaceen arimo uusan koontarooli karin.
Waxa uu qoray: “Baahida aan u qabo inaan kulamo la badiyo Dalian weli waa ay taagan tahay. Waxaan kooxdeyda u rajeynayaa nasiib wacan! Waan u imaan doonaa inaan caawiyo kooxdyeda, waxaana badin doonaa kulanka xiga.”
Laakiin kooxda reer China ayaa go’aansatay inay ciqaabto xiddiga reer Begium iyadoo Carrasco laga mamnuucay inuu ka soo agdhawaado garoonka tababarka.
Waxa uu haatan heystaa seddex maalmood oo uu ku raaligeliyo asxaabtiisa kooxda, waxaana harsan in la arko in haddii xiddigii hore ee Monaco loo ogolaan doono inuu dheelo kulanka Axada ee Taijin Quanjian.
Warbixin ay soo saartay kooxda ayaa lagu yiri: “Yannick Carrasco oo u ciyaara Dalian Football Club waxa uu ka maqnaa kulankii aan martida u aheyd Hebei China Fortune, waxaana uu seegay tababarka.
“Kooxda waxa ay ku soo rogeysaa ganaaxyadaan: Waxay kooxda ku amreysaa Carrasco inuu seddex maalmood gudahood ku raaligeliyo kooxda islamarkaana uu joojiyo tababarka.
“Kooxda waxa ay mar walba muhiimad siineysaa dishibiliinka iyo anshaxa ciyaartoyda, mana jiro shaqsi ka weyn kooxda.
“Kooxda waxa ay si siman u la dhaqantaa ciyaartoydeeda.”
Talaabadaan ugu danbeysay ayaa ka dhigeysa in Carrasco uu u sii dhawaado ku biirista kooxda Arsenal iyadoo xitaa ciyaartoyda kooxda Shiinaha ay qirteen in Carrasco uu caajib badan muujinayay isbuucyadii ugu danbeysay si kooxda ugu qasbo inay iibiso.